Lalàna 10 hitarika tetik'asa famoronana tsara - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Na eo antenatenan'ny taona 2018 aza dia zatra miasa irery isika. Ho an'ny asa mizaka tena sy mampiankina tena. Rehefa te-hanao tetik'asa lehibe isika dia voatery mamorona ekipa. Amin'ity tranga ity dia tsy mandeha izany raha mifampiraharaha amin'ireo namana izay 'manampy' antsika any am-piasana isika. Tsy maintsy manendry ambaratongam-pahefana hametrahana tsara ny masonkarena iadidian'ny olona tsirairay izahay. Araka izany, ny sasany dia hanana andraikitra lehibe indrindra ary ny sasany kosa hanana asa kely indrindra. Manana lalàna 10 isika, farafaharatsiny izay ho hitantsika eto.
Ireo lalàna 10 izay hodinihintsika dia hanandrana anao hametraka ny mason-tsivanao manokana hitarika tetikasa. Noho izany, rehefa manangana orinasanao manokana ianao ary manatanteraka ny tetikasanao, dia ho fantatrao ireo hevi-dehibe mba ho mpitondra tsara.
1 Ny ambony
2 Ny fitaomana eo amin'ny ekipa
3 Misy dingana ny zava-drehetra
4 Mandeha an-tsambo mankany amin'ny lalana iray ihany
5 Raha mahay manentana ianao dia hanana mpihaino
6 Eo anelanelanao izaho sy ianao
7 Matokia sy manaja
8 Sariho ny namanao
9 Ampaherezo ny ekipanao
10 Ny lova navelan'ny mpitarika
Milaza foana aho fa tsy maintsy mitady mpitarika ekipa fa tsy boss. Ny mitovy amin'ny tena dia tsy maintsy mino fa izy no mpitondra, ny mpitari-dalana fa tsy ny lehiben'ny fahefana. Amin'izany fomba izany dia hitazomana ekipa miasa mamorona sy mavitrika isika. Io fahaiza-mitarika io dia hamaritra ny fahombiazan'ny olona.
Ny fitaomana eo amin'ny ekipa
Rehefa mandrafitra ny orinasanao ianao dia matetika no mieritreritra fa zavatra rehetra izahay. Tsy mandeha izany raha tsy misy antsika ary ny zavatra manodidina antsika dia misaotra ny tenantsika. Tsy miantoka ny fitarihana ny fahefana. Noho izany dia afaka manana mpiasa ianao ary mahazo vola, fa ny ekipa ve ho mazoto sa hamorona ampy? Ny fahefana dia tsy manome anao ny mpitarika hahatratraranao ny tanjonao. Tsy maintsy mahatoky ianao ary mitaona ny mpiasanao mba hahatsapan'izy ireo fa voatarika tsara amin'ny tetik'asa ianao.
Misy dingana ny zava-drehetra
Nahita lalàna roa isika fa tsy tratra mihitsy ao anatin'ny indray mipi-maso. Ny zava-misy amin'ny famoronana ekipa, orinasa ary fananana tetikasa azo itokisana dia tsy mahatonga anao ho mpitondra. Ity dia momba ny mekanisation, indray andro. Tsy maintsy mametraka fepetra sy fifandraisana amin'ny mpiasao isan'andro ianao mba hiasa izany.
Mivoatra isan'andro ny fahaiza-mitarika
Mandeha an-tsambo mankany amin'ny lalana iray ihany
Na iza na iza afaka mandray an-tanana ny tetik'asa iray ary hitantana. Ataovy mazava tsara ny toerana misy anao amin'ny toerana misy anao manararaotra. Tonga ny olana rehefa te hahatratra tanjona iray ianao. Raha tsy azonao atao ny mahita ireo milahatra aminao hahita ny tanjona, mety tsy hitarika na inona na inona ianao.
Raha mahay manentana ianao dia hanana mpihaino
Tsy momba ny fampianarana indoktria izany, na ny fampiofanana ireo mpiasa manaraka ny tetikasanao. Mila mahazo ny mety tsara indrindra avy amin'izy ireo ianao, izany no antony hitarihana tetikasa tsy maintsy hainao ny mamindra. Raha mitazona fihetsika akaiky miaraka amin'ny ekipanao ianao, rehefa miteny ianao dia hihaino anao izy ireo. Ary noho izany, hanampy anao hahatratra ny tanjonao izy ireo.
Eo anelanelanao izaho sy ianao
Araka ny efa nolazainay teo aloha, mila tetikasa hentitra ianao. Avy amin'ny fijoroana mafy orina, izay manondro ny fahaizanao mitarika. Hisy fiantraikany tsara amin'ny ekipanao izany, satria hino izy ireo fa tsara ny zavatra ataony. Mba hinoan'ny ekipa anao dia mila fahatokisan-tena izy ireo raha hanao izany raha tsy manontany tena ny zava-drehetra. Tena ilaina ny fametrahana tontolon'ny fifampitokisana eo aminao sy ny ekipanao.
Matokia sy manaja
Ny olombelona amin'ny toetrany voalohany dia mila olona manana fahaiza-mitarika. Ny olona iray izay manana ny tenany dia manana toetra izay mahery noho izy. Amin'ity fomba ity ianao dia afaka hitari-dalana ny dian'izy ireo ary hanaraka ny lamina tsirairay izy ireo. Tazomy izany mandrobo zava-dehibe ny fananana ekipa miasa miray.
Sariho ny namanao
Hiankina amin'ny asa ataonao voalohany hanintonana mpiasa tsara amin'ny ekipanao. Miankina amin'ny fomba fiasanao, amin'ny fotoana sy kalitao, dia hisarika ekipa asa mitovy toetra aminy ianao. Hitan'izy ireo ao aminao ny asa feno fanoloran-tena sy manaitaitra. Raha toa kosa ianao ka miasa tsy fahafaham-po, ratsy sy haingana, dia hanahaka ny toeranao izy ireo.
Ny mety ho an'ny mpitondra dia mamaritra izay manodidina azy. Indraindray dia hitantsika amin'ny namana izany, alaintsika tahaka ny zavatra ao anatin'ny vondron'ireo namantsika. Toy izany koa no miasa amin'ny
Ampaherezo ny ekipanao
Tsy ny fanondroana ilay olona tsy mety akory no hahatonga azy ireo hatahotra fa diso izy ireo. Ao anatin'ny tontolo mamorona dia zava-dehibe ny fampivelarana hevitra sy ny fanaovana lesoka. Fanandramana amin'ny fironana vaovao ary fantaro izay zava-baovao. Raha manondro sy manesoeso ianao amin'ny fitadiavana olon-dratsy dia tsy ho afaka hamporisika ny ekipanao mankany amin'ny tanjona iraisana ianao.
Ny lova navelan'ny mpitarika
Ny soatoavinao amin'ny maha-mpitarika anao dia tsy maintsy refesina amin'ny manodidina anao. Raha manana fifandimbiasana tsara ianao dia hanana lova lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Lalàna 10 hitarika tetik'asa famoronana tsara